Dimanjato taona nandritra ny dia 1519 Circumnavigation - 2019 - The World March
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Dimanjato taona nandritra ny dia 1519 Circumnavigation - 2019
Dimanjato taona nandritra ny dia 1519 Circumnavigation - 2019
04 / 08 / 2019 03 / 08 / 2019 ny Antonio Gancedo
2 ° Diabe ho an'izao tontolo izao ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny tsy fanam-pahalemana dia mifandrindra amin'ny taona 500 amin'ny dia 1519 Circumnavigation - 2019
By: Sonia Venegas Paz, Ekoatera
Miaraka amin'ny tanjon'ny fanokafana lalana ara-barotra miaraka amin'ireo nosy manitra any andrefana, dia mitady ihany koa fiampitana eo amin'ny ranomasimbe Atlantika sy Pasifika, satria ny 10 tamin'ny volana aogositra 1519 dia nanambara io dia io tany Seville, fa ny 20 ihany no hita. Ny volana septambra tamin'io taona io dia nisy ny fitsangatsanganana an-tsambo avy any Sanlúcar de Barrameda - Espaina, izay namboarina tamin'ny sambo 5 ary nalain'i Fernando de Magallanes, no hazakazaka lehibe indrindra tamin'ny taonjato faha-16, notohanan'ny satro-boninahitra Espaniola, izay nifarana notarihin'i Sebastián El Cano, izay nahatontosa ny dia voalohany tamin'ny dia.
Niala tao Sanlucar de Barrameda ny sambo 5
Ny sambo 5 nandao an'i Sanlucar de Barrameda dia:
Andriamanitra telo izay iray, miaraka amin'ny crew 62 izay niaviany Fernando de Magallanes na Hernando de Magallanes, izay namarana ny diany tany amin'ny nosy Moluccan niaraka tamin'ny 17 an-dranomasina tafavoaka, tsy nahatanteraka ny faniriany hiverina any Espaina.
San Antonio, miaraka amin'ny ekipan'ny 57 nobaboin'i Juan Cartagena, Nikomy tamin'ny krismasy 1 tamin'ny 1520 tao amin'ny Strait of Magellan ity tamin'ny volana Mey 6 avy ao amin'ny 1521 ity mpiasa ity.
bohoka, miaraka amin'ny andiany 44 nodidian'i Gaspar de Quezada, Ity sambo ity dia navela sy nodorana teo anoloan ny Nosy Bohol tao Filipanas, noho ny tsy fisian'ny andian-tsika ampy hahafahany manidina azy.
Victoria, miaraka amin'ny andiany 45 nodidian'i Luis de Mendoza, Iray izy no namita ny dia. Niverina tany Seville izy tamin'ny septambra 8 an'ny 1522 niaraka tamin'ny sisa velona 17.
Santiago, miaraka amin'ny ekipan'ny 31 notarihin'i Juan Serrano, ny 22 ny volana Mey ny 1520 dia rava, tao amin'ny tranon'ny reniranon'i Santa Cruz (Patagonia Argentina)
Niala tao Seville tao 10 ny ekipa tamin'ny Aogositra 1519, nandao ny renirano Las Mulas, teo amin'ny Reniranon'i Guadalquivir, akaikin'ny ilany andrefan'ny tetezana San Telmo ankehitriny. Ny sambo dia nidina tany Guadalquivir mandra-pahatongan'ny vavany, tao Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), seranan-tsambo amin'ny Ranomasimbe Atlantika. Nandritra ny herinandro taorian'io dia tonga i Fernando de Magallanes sy ireo kapiteny ka nankany Seville hihaona hetsika isan-karazany tsy ampoizina ary nandresy ny sarotra sasany, rehefa nanangona ny fitaratra ho an'ny dia. I Magallanes tenany mihitsy no nanome sitrapo tany Seville ny Aogositra 24.
Nanohy ny tanàna sasany hatrany Sanlucar izy ireo. Andro vitsivitsy taty aoriana dia tonga tao anaty chalupas ny Sefandriana ary ny komandin'ny sambo hafa, avy any Seville ka hatrany San Lúcar, ary vita ny vituallar ilay kianja. Isaky ny maraina izy dia nankany an-tsaha handre ny lamesa ao amin'ny fiangonan'ny NS de Barrameda; ary alohan'ny handehanany dia tapa-kevitra ny tompon'andraikitra fa hiaiky ny ekipa iray manontolo, mandrara ny fitobahan'ny vehivavy ao amin'io kianja io. Ny 20 tamin'ny volana septambra dia niainga avy tany Sanlucar de Barrameda.
Noho izany, ny 10 ny volana aogositra an'ny 1519, dia nandeha ho amin'ny fitsangatsanganana an-dranomasina lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ka amin'ity XAUMX 10 2019 ity amin'ny 500 dia hamadika ny XNUMX an-taonany amin'izany fotoana lehibe izany.
500 taona aty aoriana
Ny 2.ᵃ Diarin'ny Erantany ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana, nifanandrify tamin'ity daty ity satria hanomboka ny 2 ny volana Oktobra ny 2019, handeha hamakivaky izao tontolo izao izy amin'ny dia mitovitovy amin'ny an'i Magallanes sy El Cano fa izany dia manentana ny ankamaroan'ny sitrapo maha-olombelona, ​​vondrona sosialy, hetsika ara-tontolo iainana, mpiaro ny zon'olombelona ary a olona tsy tambo isaina izay mifikitra isan’andro ary rehefa mandalo ny firenena tsirairay ny MM dia mety izy ireo no hikambana aminà hetsika isan-karazany isaky ny tanàna sy idiosyncrasy.
Ity volana martsa ity koa dia hiala any Espana, avy any Madrid, ny 2 Oktobra. Ao anatin'ilay fitsidihana ny Mediterane, Africa, America avy any Etazonia. any Shily, Oseania, Azia, Eropa, miverina ao Madrid ny 8 ny martsa 2020, Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, izay hifarana ny 2.ᵃ Diabe ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fahatoniana aorian'ny fanodikodinana ny Tany 500 taona aty aoriana.
Manomana ny Diabe Eran-tany i Amerika
Saint Vincent sy ny Grenadines dia nanao sonia ny TPAN